Poolisoonni Finfinnee dubartii yeroo reeban viidiyoon waraabaman to’ataman – AMBO TV
Miseensonni poolisii dubartii yeroo reeban viidiyoon waraabaman to’annoo jala ooluun qorannoon isaanirratti geggeeffamaa jiraachuu Poolisiin Finfinnee beeksise.
Viidiyoon poolisonni uffata danbii keewwatan yeroo dubartii dhaanan agarsiisu kuni miidiyaa hawaasaa gubbaa bal’inaan qoodamaa kan ture oggaa tahu, mufii guddaas uumeera.
Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo, naannoo Mikaa’el Addabaabaay jedhamutti ALI Fulbaana 21, 2014, guyyaa keessaa sa’aatii 5:00 irrattidha reebichi kuni kan raawwate jedhe poolisiin.
Viidiyoon marsaalee hawaasaarratti bal’inaan qoodame kun akka agarsiisutti, poolisoonni uffata dambii poolisii magaalattii uffataniifi kilaashii baatan, dubartii tokko haala suukanneessaa taheen wayita dhaanan mul’isa.
Keessattuu inni tokko dhiitichoon/xarabaan miila lamaan dubartii kanaa dhayee lafa buusuun, inni tokko ammoo kaballaan irra deddeebiin wayita dhawu argama.
Kana malees dubartii haga ammaatti maqaan ishee hin baramane kana wajjin, daa’imni xiqqoon kan turte wayita tahu, naasuunis boo’aa turte.
Poolisiin Finfinnee ibsa miidiyaa hawaasaa isaarratti dhiyeenya baaseen, poolisoonni buufata poolisii Qoree, Inspeektara ittaanaa Jaafaar fi Konistaabil Masfin jedhaman kunneen gochaa naamuusa poolisiin ala tahe raawwachuun to’annoo jala oolanii qoratamaa jiru jedheera.
Poolisiin Finfinnee ‘’namummaan uummata tajaajiluu qaljeefama jedhu qabaachuun,’’ otoo beekamuu kanneen qajeelfama kan cabsan hin obsu jedheera poolisiin Finffinnee.
Bara 2013 keessattis miseensota poolisiifi hogganoota balleessaan garagaraa irratti argame 171 geggeessera jedhe.
Kanneen keessaas 29 sarbama mirga namoomaan tahuu ibseera.
Miseensota poolisii dubartittii reeban irratti tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun uummata akka beeksisu ibseera.
Poolisin finfinnee “Hawaasnis gochaa naamuusa poolisiin ala tahe gaafa argu akka gabaasu waamicha dhiyeesseera poolisiin Finfinnee.
Namni kamuu gochaa naamuusa namoomaatiin ala tahe gaafa argu gochaa suukkaneessa qaxaramtoota fi ergamtoota mootummaas ta’ee nama dhuunfaa waraabuun qilleensa irra akka oolchee saaxilu AMBO TV(AT)’n waamicha keenya dabarsina.
Previous PostIntalli mootii Jaappaan iyyeessatti heerumte hiree sanyii mootummaa dhabde
Next PostFeltimaan fi Hamdok Tigraayitti atattamaan waliigaltee dhukaasa dhaaburra gahamuu akka qabu waliigalan